JINGHPAW KASA: နယ်ခြားမှတ်တိုင် (၆) အနီးမှ ဗမာအစိုးရ တပ်စခန်းကို ကေအိုင်အေ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်
နယ်ခြားမှတ်တိုင် (၆) အနီးမှ ဗမာအစိုးရ တပ်စခန်းကို ကေအိုင်အေ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်
ဒီဇင်ဘာ (၁၈) အင်္ဂါ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အို အစိုးရ မြောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၁) လက်အောက်၊ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃၃) နယ်မြေဖြစ်သော ပန်ဝါဒေသ ကချင်ပြည်နှင့် တရုတ်ပြည် နယ်ခြားမှတ်တိုင် (၆) အနီးရှိ ဗမာအစိုးရ အမှတ် (၅၊၆) ဟု အမည်ပေးထားသော တပ်စခန်းကို ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ ဒီဇင်ဘာ (၁၈) ရက် နေ့လည်ပိုင်းတွင် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော် များမှ ဤဗမာတပ်စခန်းကို ဒီဇင်ဘာ (၁၆) ရက်နေမှ စတင်ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီဇင်ဘာ (၁၇) ရက်နေ့တွင် တိုက်ခိုက်ခြင်းကို နားထားပြီး ယနေ့မနက်တွင် ပြန်လည် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို့ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အသေးစိတ် သတင်းများကို သိရှိနိုင်ရန်း ဆက်လက်စုံစမ်းလျက်ရှိပါသည်။
Kachin patriotic army occupied at Burmese Army post number5and 6, it is near Kachin and China boarder post No. (6) which is under KIA (33) battalion, KIA 1st Brigade area on 18th December noon according to the KIA front line officer report. Actually, KIA troops started to fight these post from 16th December but ceased fire 17th December the whole day and fought again this morning and occupied these posts. Detail information is not coming yet.
ဟုတ် ရဲ့ လားးးးးးးးးးးးးးးး ဟုတ် ရဲ့ လားးးးးးးးးးးးး
ဗမာဟုတ်ပေမယ့် စစ်အာဏာရှင် တည်တံ့အောင် ကူညီသူတွေ ခွေးသေ ၀က်သေသေကြစေ။
စိတ် ကောင်း ထား ပါ
This is the sign of total escape from Burmese domination. Establishing of the whole Burma to be free from Junta descendants.
ဘာ မှ မ ဆိုင် ဘူး
တော်တယ် ပေါ့ဟားဟားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေနွေးပွဲအဆင်မပြေရင်kiaရဲ့ နောက်ဆုံးဇတ်သိမ်းကြည့်အဲဒီ အချိန်မှ လက်နက်လေးနဲ့ ကြောက်လို့အလင်း ဝင်မလာနဲ့
kiaတွေခွေးသေဝက်သေ သေတဲ့ဟာလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားကြနော်။ဒါမှနောက်လာနောက်သားတွေကိုတိုင်းပြည်ကိုအနှောက်အယှက်ပေးတဲ့ကောင်တွေဘယ်လိုသေတာဆိုပြီးပြရအောင်။နင်တို့သတ် လို့သေသွားတဲ့တပ်မတော်သားတွေရဲ့မိန်းမတွေထဲမှာနင်တို့နှမတွေပါနေဦးမယ်။သတိသာထားကြ။
နီး ပြီ နီးပြီ။
သေ ဖို့သေ ဖို့ နီး ပြီ ပြော တာ။
Comment လိုက် ရေး နေတဲ့ လူ ရဲ့အဆင့် အတန်းအရမ်းနိမ့်တယ်